स्वस्थ र मजबुत दाँतको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यास्ता छन् जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
चिकित्सकका अनुसार हामीले दिनमा कम्तीमा पनि दुई पटक ब्रस गर्नुपर्छ र ब्रस गरेपछि नुनपानीले कुल्ला वा माउथ वास गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो दाँत र गीजाहरुलाई ब्याक्टेरियाबाट बचाउँछ । ब्रस गर्ने सहि तरिका थाहा पाइराख्नु दाँतको सुरक्षाको पहिलो कदम हो । त्यसैले यी कुराहरु जानीराखौंः
हड्डी र दाँत बलियो बनाउन नियमित रुपमा हरिया सागसब्जी, मौसमी फलफूल पनि खानु आवश्यक हुन्छ । यसले शरीरलाई स्वस्थ बनाउन र आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हुन्छ ।
खानामा नियमित दहीको सेवन गर्नाले यसमा भएको तत्वले हड्डी र दाँतलाई मजबुत बनाउँछ । एक कप दहीमा ४५० मिग्रा क्याल्शिियम हुन्छ । त्यसैले दहीको नियमित सेवन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
गुँडमा पसस्त मात्रामा फसफोरस र क्याल्सियम हुन्छ । एक कप गुँणमा ८० मिग्रा क्याल्सियम पाइन्छ । यसले हड्डी र दाँत बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
दुध प्रोटीन, क्याल्सियम, चिल्लोपदार्थ हुन्छ । दुध जुनसुकै उमेरका ब्यक्तिका लागि लाभदायी हुन्छ । एक गिलास दुधमा २४० मिग्रा क्याल्सिय पाइन्छ ।
दाँत किन पहेँलो र कालो हुन्छ ? ब्रस नगर्दा स्वास्थ्यमा हुने खतराहरु र दाँत तथा गिँजा स्वस्थ राख्ने उपायहरू
दाँतमा बस्ने दाग प्रायः दुई किसिमका हुन्छन, बाहिरी र भित्री
दाँत सफा नगर्दा दाँतमा किरा लाग्ने वा बिग्रने मात्र नभएर गिजा सम्बन्धी गम्भीर रोग पनि लाग्न सक्छ । कुनै कुनै केसमा त किराले दाँत प्वाल पार्नेमात्र होइन दाँतलाई जरासम्म जोड्ने हाडसमेत नष्ट हुन्छ ।
ब्याक्टेरियाले उत्पादन गर्ने इन्जाइमले दाँतका हाड खियाउँछ, अन्त्यमा गिजासम्बन्धी रोग लाग्छ र इन्फेक्सन हुन्छ । त्यतीमात्र नभएर हाम्रो सिङगो शरिरलाई यस्तो रोग लगाउछन् ।
मुख र दाँत सफा नगर्दा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्छ । मुखमा उत्पन्न हुने ब्याक्टेरिया र दाँत सफा नगर्नुबीच सम्बन्ध छ ।
२.बच्चा जन्मनमा समस्या
दाँत सफा गर्नु गर्भवतीका लागि अझ बढी महत्वपूर्ण छ । किनभने गर्भवतीले दाँत सफा नगर्दाको असर गर्भमा समेत पर्छ । दाँत सफा नगर्नुको असर गर्भको बच्चाको वजन थोरै हुने, समय नै नपुगी जन्मने र हुनुपर्नेजस्तो शारीरिक विकास हुँदैन ।
दाँतको सफाइ नगर्दा मधुमेह उत्पन्न हुनसक्छ । जर्नल अफ अमेरिकन डेन्टल एसोसिएसनमा प्रकाशित एउटा अध्ययनले गिजासम्बन्धी रोग र मधुमेहबीच सम्बन्ध रहेको पत्ता लगाएको छ।अध्ययनले एउटा भएका कारणले अर्को हुने भनेर ठोकुवा नै गरेको छैन ।
दाँत सफा नगर्दा उत्पन्न हुने प्लेक रक्त प्रवाहमा प्रवेश गरेपछि रक्त नलीमा समेत प्लेक जम्मा हुन्छ । यसले मस्तिष्क र मुटुमा रक्त प्रवाहमा अवरोध गर्छ । फलस्वरुप मस्तिष्कघात र हृदयघात हुनसक्छ।
सुन्दर दाँत र स्वस्थ गिँजा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यी १० उपायहरू अपनाउनुहोस्
ब्रस समात्ने उचित तरिका आफ्नो ब्रसलाई गिँजासँग ४५ डिग्रीको कोण बनाएर माझ्नु र बिस्तारै आरामले माझ्नु हो ।
Don't Miss it कसरी लाग्छ शरीरमा क्यान्सर ? जानिराखाैँ
Up Next यस्ता गल्तीले निम्तिन सक्छ कानको समस्या, महत्त्वपुर्ण जानकारी पढेपछि सेयर गर्नुहाेला
कस्ता मान्छेलाई बेलुका सन्चै सुतेको बिहान मृत भेटिन्छन् ? जान्नुहोस
कस्ता मान्छेलाई हुनसक्छ ? १ मिलेका दाँत र तलको चिउँडो सानो भएका २ मुटु र किड्नीका बिरामी ३ मोटोपना भएका…